Sunday June 16, 2019 - 21:41:10 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Afhayeenka Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Cabdil caziiz Abuu Muscab ayaa qabtay shir jaraa'id oo uu kaga hadlay howlgalladii ugu dambeeyay ee ay ciidamada Mujaahidiinta ka fuliyeen NFD Iyo Soomaaliya.
Sheekh Abuu Muscab, wuxuu si gaar ah usoo hadal qaaday howlgalladii u dambeeyey ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay dhulka NFD ee ku jira gumeysiga dowladda Kenya, isagoona ka hadlay khasaaraha ka dhashey weeraradaas.
Wuxuu sidoo kale Afhayeenku soo hadal qaaday qaraxyadii maalintii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaas oo gallaaftay nolosha inkabadan 30 xubnood oo katirsan dowladda federaalka.
Dhacdooyinka uu Afhayeenka ciidamada Mujaahidiinta Al-Shabaab ka hadlay waxaa sidoo kale kamid ah howlgal gaar ah oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo kaas oo lagu dilay sarkaal lagu magacaabo Cali Dhiif oo katirsanaa kuwa sirdoonka maamulka Galmudug.
Halkan ka dhagayso Shir Jaraa’id -Sh Abuu Muscab uu kaga hadlay howlgalladii u dambeeyay.